Waa kuma siyaasiyiinta laga saaray liiska Aqalka Sare ee Puntland? | BANAADIRSOM
Home Wararka Maanta Waa kuma siyaasiyiinta laga saaray liiska Aqalka Sare ee Puntland?
Waa kuma siyaasiyiinta laga saaray liiska Aqalka Sare ee Puntland?
Madaxweynaha dowlada goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa soo saaray liiska musharaxiinta u tartameysa kamid noqoshada Aqalka Sare ee Baarlamaanka federaalka ku matali doona maamulka Puntland.
Puntland ayaa Aqalka Sare ku leh ilaa 11-xubnood oo soo dooran doonaan Baarlamaanka maamulkaasi, waxaana musharaxiinta tartameysa laga reebay siyaasiyiin miisaan culus oo horey uga tirsanaa Aqalka Sare.
Liiska Musharaxiinta uu soo saaray Madaxweyne Deni kaliya waxaa ku jira labo musharax oo horey uga tirsanaa Senatarada Aqalka Sare ee Waqtigoodu dhamaaday kuwaa oo kala ah Cabdiraxmaan Faraale iyo iyo Farxaan Cali Xuseen.
Madaxweyne Deni ayaa meesha ka saaray siyaasiyiin caan ah oo saameyn badan ku lahaa siyaasada oo horey ugu matalayay Puntland Aqalka Sare kuwaa ay kamid yihiin Ra’isul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid iyo C/Risaaq Jurile.
Liiska Musharaxiinta u taagan Aqlka Sare ee dooran doonaan Baarlamaanka Puntland ayaa u badan kuwa aan horey siyaasada looga aqoon, waxaana xubnahan ku jira masuuliyiin xilal ka haya maamulka Puntland.
Inta badan xubnaha kusoo bixi doono Aqalka Sare ee dooran doonaan Baarlamaanka Puntland ayaa hadaba lasii ogyahay, waxaana xubnahaasi yihiin kuwa aad ugu dhaw Madaxweyne Deni oo wararka xanta sheegayaan in uu yahay Musharax Madaxweyne.
Previous articleWARARKA:Arsenal Oo Man Utd Duulaan Ku Ah, Trippier Iyo Xaalkiisa, Messi & Man U Xogtii Ugu Dambeysey
Next articleMuxuu kala hadlay madaxweynaha Galmudug xubnaha guddiga doorashooyinka ee uu la kulmay?